Okpukpọ Igwe Akara Akpanya Ugboro abụọ China Manufacturer
Nkọwa:Dịka Ọnụ Ụzọ Ákwà Glass Gite,Ọnụ ọnụ ụlọ ọnụahịa nke ọnụahịa dị ka ọnụahịa,Mee ka ntinye mpempe nkedo dị ka mmiri
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Nkedo Glass > Okpukpọ Igwe Akara Akpanya Ugboro abụọ
Okpukpọ Igwe Akara Akpanya Ugboro abụọ
Ihe Nlereanya.: HF-J 426
Ubu oke: 500 sets per month
Akwụkwọ: ISO9001, CE,SGS, TUV
Usoro HS: 7308300000
Onu oghere na akpaaka enwere ike iji ya mee ihe maka akwukwo akwukwo akwukwo ma obu ndi mmadu na-ewepu onu uzo. a pụkwara itinye ya n'ọrụ n'èzí ọnụ ụzọ iko. Na ntinye pụrụ iche nke 4.2 m nke ala ala na mkpuchi (ogologo ntụle 4.2m, nwere ike belata dịka mkpa nke ndị ahịa), ụda mkpọtụ dịka ígwè na-agbanyeghị ígwè, onye na-adịghị na dijitalụ ma ọ bụ dijitalụ microcomputer, ngwa ntinye inyogo ndakwaa (German Innosent chip) nnyeghari nhazi nke nhọrọ ma ọ bụ igodo ntanetị ọrụ, ọ dị mfe iji wụnye, debug, rụọ ọrụ na ịnọgide na-enwe ike izute ihe dị iche iche dị iche iche nke ụzọ ụzọ mgbochi dị iche iche.
Enwere ụzọ atọ dị mkpa maka ọrụ nke ụzọ mgbochi ọgbara ọhụrụ:
1 Ụdị pedal ụkwụ: a na-etinye mgbanaka nrụnye n'okpuru pedal.
2 Ụdị ụdị ụda foto: A na-etinye ọkụ ọkụ na-ekpuchi ngwaọrụ na ngwaọrụ eletriki foto na nso ọnụ ụzọ.
3 Ọnọdụ bọtịnụ: Pịa bọtịnụ dị ka mgba ọkụ ka imepee akwukwo akwukwo. Ọnụ ụzọ na-emeghe mepee ma mechie akwukwo akwukwo site na igbanyere, ihicha ma obu mpia. Iji gbochie ohi, ngwá ọrụ pụrụ iche ga-arụ ọrụ n'otu oge ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mkpa ka a kwadebere ụlọ mpempe aka maka ụlọ dịka onye nwere njirimara onye njirimara ma ọ bụ telivishọn, na ndị ọrụ na-anọghị n'ụlọ na-egbochi ya.
Nkà na ụzụ nke ụzọ nkwụsị:
Akpanaka iko iko ụzọ maka ọnụ ụzọ na frameless iko ọnụ ụzọ:
Mkpụrụ ahụ bụ VDC na-enweghị ihe ọ bụla na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, na-arụ ọrụ dị jụụ, na-enweghị nchekwa, nnukwu ọkụ na nnukwu ọsọ ọsọ.
(2) Onye nchịkwa:
Enwere ike ịmepụta onye nwere ọgụgụ isi nwere ike ijikọta usoro nchekwa / mkpuchi ọ bụla, nyochaa onwe onye na nhazi, ma debe data niile maka njem ụzọ na njikwa.
Onye ọrụ ahụ nwere ike rụọ ọrụ na-enweghị ike ijigide (nchekwa batrị) na nchekwa n'oge nsogbu ike.
(4) ụgbọala eletrik:
A na-eji ụgbọala eriri eriri eriri aka nke onye na-arụ ọrụ na fiberglass na-eme ka ọ dị elu ma nwee ihu naịlọn maka ikpuchi ezé na pulley. Nchikota a na - emepụta arụmọrụ dị jụụ.
Mkpọchi nke electromechanical: Na-enye nhọrọ nkedo nkedo nke nchekwa maka nchekwa zuru ezu ma nwee ike gbanwee na-enweghị ntuchi akwụkwọ, ntụgharị: E. Ogidi ọnụ ụzọ dị nfe. Mkpọchi bụ usoro ihe mkpọchi eletrik na-achịkwa microprocessor. Onye na-ahụ maka microprocessor nyochaa akụkụ niile nke ọrụ mkpọchi ahụ. EG Mgbe mkpọchi ahụ dị 100%, jide n'aka na emechiela ụzọ ahụ. Enwere ike ịmepụta mmepụta ngosipụta iji gosipụta ọnụ ụzọ na mkpọchi mkpọchi na nchekwa nchekwa. Ọ bụrụ na-egbochi ije ahụ,
Ọrụ ọnụ ụzọ ga-agbanweghị na nduzi ya ọ bụla na nhazi ọhụụ ga-edozi.
Ntak ịhọrọ ngwaahịa anyị?
1) Nchedo: Mgbe ọnụ ụzọ na-agba ọsọ, nkwụsị ahụ ga-amalite ọrụ ịwụgharị na-akpaghị aka. A na-eji anya eletrik elee anya iji chọpụta ihe mgbochi ahụ, ọnụ ụzọ ahụ nwere ike na-ezere ya.
2) Mkpu ụda: Ọhụụ pụrụ iche nịịlọn ndu ụgbọ - onwe-lubricating naịlọn-erikpu pulley nhazi, n'ụzọ dị irè iwelata mkpọtụ n'oge ọrụ
3) Nchekwa: Ọtụtụ ọrụ na-enye gị ohere ịhọrọ ahọrọ na-emeghe, akpaka, wepụ ma kpọchie ọnọdụ dịka mkpa gị. Ọ dị mfe ịtọ ma gbanwee ọsọ ọsọ, ọsọ ọsọ, imeghe oge, wdg.
4) N'ikpuru ya: Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, akụ, ụlọ ọrụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, họtel, ebe ịzụ ahịa, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, wdg, iji hụ na ndị mmadụ na-eje ije ma na-ebu ibu
5) Na akwa elasticity na density hanger ala. Usoro abuo iji gbochie onu uzo n'oge oru ma di mfe igbanwe onodu na nhazi.
6) Akụrụngwa dị iche iche dị: onye na-ahọpụta ọnọdụ, mkpọchi ngwaọrụ, batrị na sensọ.
7) Ngwadogwu ugha.
8) Akwụkwọ ikike: ọnwa 18
9) Usoro nchịkwa ikike nke mgbagwoju anya na mgbanaka ikuku maka nchebe onye ọrụ
1 0) Ọrụ ngbochi na- eme ka onye ọrụ ahụ dịkwuo nchebe ma nwee ntụkwasị obi karị.
11) Ọnụ ụzọ ga-enwe ike ịrụ ọrụ ihe dị ka ugboro 200 (meghere ma mechie) n'oge ikuku ike.
12) Ọrụ ise dị iche iche na igodo ọrụ ntanetị: Na-emeghe mgbe niile, ọkara oghere, ụzọ ọpụpụ, mkpọchi, nkịtị emeghe.
13) Ezi ihe ngwọta maka ngwa, dịka ọmụmaatụ, nbipị aka, njikwa nkwụgharị, bọtịnụ push, igodo ụzọ, ihe nchedo, mkpu ọkụ, ntinye vidiyo na ịntanetị na ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko jụọ m ngwa ngwa.
A: Ngwaahịa anyị na-akwụ ụgwọ maka otu afọ, nsogbu ọ bụla nwere nsogbu na oge a na-akwado nkwado na-enweghị isi. N'ezie, ọnụego nke nrụzi dị n'okpuru 1%.
Ngwaahịa : Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Nkedo Glass
Ọnụ ụzọ mpempe aka maka Office Building Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ mpempe akwụkwọ na-agba chaa chaa Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Igwe Mmiri Ntugharị Azụmahịa Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ nkedo akpaaka Kpọtụrụ ugbu a
Ọdịdị Aluminom na-abanye n'Ọnụ Ụzọ Ákwà Nkedo Glass Kpọtụrụ ugbu a
Okpukpọ Igwe Akara Akpanya Ugboro abụọ Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Gbara Ịgba Glass Na-abanye Kpọtụrụ ugbu a
Oghere nke Aluminum Alloy Entrance Ọnụ Ụzọ Ámá Ịgba Glass Na-agba Kpọtụrụ ugbu a
Dịka Ọnụ Ụzọ Ákwà Glass Gite Ọnụ ọnụ ụlọ ọnụahịa nke ọnụahịa dị ka ọnụahịa Mee ka ntinye mpempe nkedo dị ka mmiri Mpụga Ọnụ Ụzọ Ákwà Bugharịa Ọnụ Ụzọ Ákwà Ọnụ Ụzọ Ákwà Fasto Motor Ọnụ Ụzọ Ákwà Ubi Turbine Dị ka Ọnụ Ụzọ Pvc Shutter